साना व्यवसायीका समस्या न्यूनीकरणकाे उद्देश्यले महासंघ स्थापना भएकाे हाेः अध्यक्ष कटुवाल-Setoghar
नरेश कटुवाल*अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसायीहरुका समस्याहरु समाधान हुन नसकेको र साना व्यवसायीहरुका समस्या तथा गुनासो सुन्ने निकाय समेत नभएको अवस्थामा साना व्यवसायीहरुका समस्या सुनुवाइ गर्ने र व्यवसायलाइ व्यवस्थित गर्दै लैजाने मान्यताले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् ।
महासंघ स्थापना बारे अध्यक्ष कटुवालले अाफ्नाे धारणा यसरी राख्छन् ।
नेपालमा जुन बेला द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो, त्यस समय सहज तवरले व्यवसायीहरुले गरीखान पाउने अवस्था नरहेको कुरालाई विचार गर्दै नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा संघहरु खुले । मुलुकमा व्यवसायीका समस्याहरु पञ्चायत काल देखि नै रहँदै आएका थिए । यद्यपि ती समस्याहरुको सही तवरले समाधान हुन नसकेका, व्यवसायीहरुले भू–कम्प, नाकाबन्दी लगायतका दैवी प्रकोपहरुको सामना गर्नुपरेको, अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको अवस्थामा पनि नेपालमा यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले आफैंले व्यवसायीहरुकै पहलमा कसैको पहल बिना कसरी व्यवसायलाई राम्रो तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले स्थापना भएका विभिन्न क्षेत्रीय तथा स्थानीय संघहरुलाई समेटेर नै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको हो ।
अहिले नेपालमा रहेका साना व्यवसायीहरुका आवाज सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले साना व्यवसायीहरुलाई समेट्दै नेपालमा व्यावसायिक समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्ने, लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउने, उद्योग स्थापनाको माध्यमबाट रोजगारी सृजना र उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने तथा आयात विस्थापन गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने लगायतका विविध उद्धेश्यहरु लिएर अघी बढेको छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पनि व्यवसायमा संलग्न रहने क्रममा विभिन्न किसिमका समस्याहरु व्यवसायीहरुले सामना गर्दै आउनुपरेको छ ।
नेपालमा विगतमा पनि व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न संघ तथा महासंघहरु स्थापना नभएका होइनन् । यद्यपि नेपालमा लामो समय देखि साना व्यवसायीहरुले आफूहरुका समस्या समाधानको निम्ति पहल गरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न माग तथा ज्ञापनपत्रहरु बुझाएपनि कसैले पनि साना व्यवसायीहरुका समस्या समाधानमा चासो दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै साना व्यवसायी तथा उद्योगीहरुलाई समेट्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको हो ।
राज्य नै सबै व्यवसायीहरुको एकमात्र नियमनकारी तथा गुनासो सुन्ने निकाय हुँदाहुँदै पनि ठूलाे सङ्ख्याका व्यवसायीहरुका समस्या सुन्न तयार नहुने सरकार केही पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीबाट प्रभावित भएर साेही बमाेजिम विभिन्न कामहरु गर्ने अवस्थामा रहेकाे कारण व्यवसायीहरु बाध्य भएर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ स्थापना गर्नुपरेकाे महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् ।
यसै सन्दर्भमा साना र मजाैला व्यवसायीहरुकाे अवस्था समस्या र महासंघका गतिविधिमा रहेर अध्यक्ष नरेश कटुलाल सँग कुराकानी गरेका थियाै‌ । प्रस्तुत छ साेही कुराकानीः
व्यवसायीहरुकाे निम्ति सरकारले निर्वाह गरेको भूमीकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाल सरकार अहिले दलाल प्रवृत्तिको छ । यसले यहाँ उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सबै व्यक्तिहरुलाई समान रुपले हेर्नुको सट्टा व्यवसायीहरु बीच विभेद सृजना गरेको छ । हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने मान्यता बमोजिम यो महासंघ हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाइरहेका छौं ।
नेपालमा अहिले सम्म साना उद्योगी र व्यवसायीहरुका समस्या समाधानमा पहल हुन नसकेको पीडा बोकेर अहिले सम्म सञ्चालन रहँदै आएका साना व्यवसायीहरु संगठित महासंघ भएको हुनाले स्थापना काल देखि नै निकै ठूलो शक्ति लिएर महासंघको जन्म भएको हो । यस बीचमा विभिन्न किसिमका अनुभवहरु महासंघले सहँदै अहिलेको अवस्थामा आउन सफल भएको छ ।
साना कला र सीप भएका व्यक्तिहरु अब मालिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर यो महासंघ त्यही सिद्धान्तको जगमा स्थापना भएको हुनाले महासंघ स्थापना पश्चात् अन्य विभिन्न समस्याहरु समेत बोकेर हामी हाम्रो महासंघमा आवद्ध सदस्यहरु सँग भेट गरेर हाम्रा व्यवसायिक माग तथा ज्ञापनपत्र बुझाएका भएपनि हामीले बुझाएका मागपत्र तथा ज्ञापनपत्रमा अझै पनि राज्यको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा साना उद्योगी र व्यवसायीहरुले राज्यको कुनै प्रत्याभुत गर्न सकेका छैनन् । यसैकारण नेपालमा सञ्चालनमा रहेका साना उद्योग तथा व्यक्तिहरुगत व्यवसायीहरुको सीप र कलाको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । अबको समयमा नेपालमा सीप र कला भएका व्यक्तिहरु मालिक बन्नुपर्छ । सीप र कलाको सम्मान हुन नसकेको कारण अहिले यो अवस्था बन्न सकेको छैन ।
व्यावसायिक वातावरण निर्माणकाे निम्ति अहिलेकाे शिक्षाकाे कत्तिकाे सहयाेग पुगेकाे छ ?
अबका दिनमा नेपालमा सीप र कला भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न सिकाउने किसिमको सीप हाम्रो शिक्षामा समेट्नु जरुरी छ । नेपालमा अहिले सम्म उद्योग तथा व्यवसायमा लाग्ने किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले सोही बमोजिमको कार्यक्रम तय गर्न नसकेको कारण अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसायमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । नेपालीहरु निकै सस्तो तलवमा विभिन्न बाह्य मुलुकहरुमा गइरहेका छन् । अबका दिनमा भने नेपालमा नै रहेर काम गर्न सक्ने किसिमका जनशक्ति तयार गर्नु जरुरी छ ।
समृद्ध मुलुक निर्माणकाे निम्ति अब राज्य पक्षले के गर्नुपर्छ ?
अहिले नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपालमा नै भित्र्याएर उनीहरुले सिकेको श्रमलाई सम्पत्तिमा बदल्ने किसिमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई सही तवरले समृद्धिको बाटोमा अघी बढाउन लामो समय लाग्दैन । नेपालमा श्रम, सीप, पुँजी, प्रविधि लगायतका सबै कुराहरु छन् । यद्यपि हामीले यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको मात्रै हो ।
साना र मझाैला व्यवसायीहरुका खास समस्या चाहिँ के हुन् नि ? तपाइहरुले महासंघबाट के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाल काठमाडौंका विभिन्न प्रचलित क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरु विभिन्न कठिन परिस्थितिका वावजुद व्यवसायमा संलग्न छन् । न्यूरोड क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुका निम्ति राज्यको उपयुक्त सम्बोधन हुन सकेको छैन । सानो लगानीमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुले निकै ठूलो रकम घरभाडाबापत बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । विद्युतीय तार, पानी, फोहोर लगायतको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । सडकको धूलोको कारण व्यवसायीहरुको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ ।
अहिले मासिक १ लाख भन्दा बढी रकम भाडा मात्र बुझाएर व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् व्यवसायीहरु । दैनिक १२ घण्टा भन्दा बढी समय आफ्नो व्यवसायमा बिताएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरुबाट लिएको कर समेत सही तवरले उपयोग हुन सकेको छैन । राज्यले व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न आफैं उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । अहिले सरकारले सााधारण जनता र व्यवसायी कसैलाई पनि सम्बोधन गर्न र सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । यसैकारण अब हामी सरकारको बाटो नहेरी हामी आफैं नै हाम्रो लागि आवश्यक औद्योगिक क्षेत्र मुलुकका ७ ओटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने योजना बमोजिम हामी अघी बढ्दैछौं ।
व्यवसायीहरु पनि उद्योग स्थापनामा नभई व्यवसायमा नै लगानी विस्तार गर्न अाकर्षित हुनुको कारण के हाेला ?
अहिले नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बनेको छैन । यसकारण नेपालमा उद्योग सञ्चालन कार्य निकै कठिन छ । यही कठिनाईको कारण मानिसहरु उद्योगमा आकर्षित नभई व्यवसायमा संलग्न छन् । भोलि परिस्थितिले साथ दिने अवस्थामा व्यवसायमा गरेको लगानीलाई उद्योगमा लगाउने योजनामा व्यवसायीहरु छन् । हामी पनि व्यवसायीलाई नै उद्योगीकाे रुपमा समेत परिणत गर्न सकिन्छ।
नेपालमा उद्योग गर्ने वातावरण बन्न सके नेपालमा उद्योगहरुमा लगानी आकर्षित नहुने होइनन् । यहाँको वातावरणको साथ नभएको कारण अहिले उद्योग स्थापना गरेका व्यक्तिहरु समेत व्यवसायीमा परिणत हुँदैछन् । अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल छ । राज्यबाट कुनै सहयोग छैन । उद्योग धानिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।